AdPushup: Chengetedza uye Gadzirisa Yako Ad Dhizaini | Martech Zone
Semuparidzi, imwe yesarudzo dzakaomesesa pakuita mari yako saiti ndiyo muyero pakati pekuwedzera mari kana kuparadza ruzivo rwako rwevashandisi. Isu tinorwa nemwero uyu zvakare - kusanganisa zvine simba zvakanangwa kushambadza zvinoenderana nemushandisi. Tariro yedu ndeyekuti kushambadza kwedu kunowedzera zvirimo nekupa zvigadzirwa kana masevhisi anogona kubatsira.
Iyo yepashure, ehe, ndeyekuti vashanyi vesaiti vanotanga kungorega kushambadza. AdPushup, sisitimu yekutonga nekugadzirisa maratidziro ako ekushambadzira, inodaidza izvi mureza upofu. AdPushup inosanganisirwa inosanganisirwa neyako saiti uye inokutendera iwe kuti ugadzire dzimwe nzvimbo dzekushambadzira kwako, kusanganisira mune-zvemukati.
AdPushup inopa chikuva chinokugonesa kukwidziridza saizi, ruvara, mhando uye kuiswa kwezvako zviripo kushambadza. Iyo sisitimu inoshandisa muchina kudzidza kudzikisira kudikanwa kwekupindira kwevanhu uye kuzvipira kwenguva, uku uchigadzirisa kuiswa kwekushambadzira kuwedzera mari.
AdPushup Zvimiro Zvinosanganisira:
Kurongwa KweAdhi Kugadziridza - Gadzira yekushambadzira dhizaini kuyedza uye otomatiki gadziridza saizi yekushambadzira, kuisirwa, mhando, uye mavara
In-zvemukati Auto Optimization Technology - In-zvemukati auto optimization scans uye zvine hungwaru inoisa kushambadza mune zvako zvemukati pasina kukanganisa UX.
Kutarisana neAd Ad Management - Shandisa poindi-uye-sarudza inoonekwa yekugadzirisa kudzora akawanda ad zvivakwa uye kumisikidza kuyedza pasina kukodha.
Mushandisi Chiitiko Kugadziridza - Wedzera mari pasina kukanganisa ruzivo rwevashanyi vewebhusaiti yako kana kugadzirisa template yayo yekugadzira.
Njere Kuenderera Mberi Optimization Injini - Kudzidza kwemuchina kunogonesa iyo sisitimu kudzidza uye kuzvigadzirisa pachayo nekuchinja maitiro evashanyi kuratidza iwo akakodzera marongero ekushambadzira anokwezva kutarisisa kwavo.
Chikamu uye Kuita Kwemunhu - Gadzira otomatiki zvikamu uye zvikamu zvekushandura marongero ekushambadzira kunatsiridza ruzivo rwevaenzi.
Analytics uye Reporting - Gara up-to-date neako account kuita nekuteedzera mhedzisiro kuburikidza ne-zvakadzika analytics, uye yetsika mishumo.
Kuendesa Kwekushambadzira - Ads anounzwa mheni nekukurumidza kuburikidza neyedu Geo-yakagoverwa yekumisikidza dhizaini yekuisa iyo inoisa hushoma mutoro pane maseva ako.
Kubatanidzwa neGoogle AdSense / AdX - Seamless kusangana ne Google AdSense uye DoubleClick Ad Exchange (AdX) iyo inokutendera kuti utange nekudzvanya kamwe chete.
Google AdSense Mutemo Kuteerera - Zvishambadziro zvako zvakagadziriswa zvinounzwa kuburikidza neGeo-yakagoverwa yekumisikidza dhizaini yekuisa iyo inoisa mashoma mutoro pane maseva ako.
Zvichida chinhu chinonyanya kufadza nezve AdPushup ndeyekuti mutengo wakavakirwa pane mugove wemari pamwe nezvipikirwa zvishoma.
Tags: kushambadzira kwekushambadzira optimizationdhizaini dhizainikurongeka kwekushambadzirakurongeka kwekushambadziraoptimizationadpushupadxbanner ad managementbanner ad advertisingbanner adsKugadziridza bannerbanner personalizationmureza chidimbuDoubleickgoogle adsenseGoogle AdSense Mutemo Kuteereramushandisi ruzivo rwekugadzirisakutaridzika kwekushambadzira kushambadzira